नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, आजै यी नयाँ मन्त्रीको टुंगो लगाउँदै - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, आजै यी नयाँ मन्त्रीको टुंगो लगाउँदै
नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, आजै यी नयाँ मन्त्रीको टुंगो लगाउँदै
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यान्ह साढे १२ बजे देखि बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा यसअघि पेस गरिएको कार्यसूचीमा छलफल हुनेछ। कार्यसूचीमाथि थप गृहकार्य गर्न सोमबारका लागि तय बैठक मंगलबारका लागि सारिएको थियो ।
गत आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिडाँडामा बसेको बैठकले विभिन्न चार कार्यसूची तय गरेको थियो। तीमध्ये पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनबारे नीतिगत छलफल भएको थियो। बाँकी कार्यसूची भित्रका एजेण्डामाथि आजको बैठकमा छलफल जनाइएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तय कार्यसूचीभित्रका एजेण्डा मंगलबारको बैठमा टुंग्याउनेगरी छलफल गरेका थिए। अध्यक्षद्वयबीच मंगलबारको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिका मापदण्ड, पार्टी एकताका बाँकी काम लगायत बिषयको टुंगो लगाउनेगरी छलफल भएको जनाइएको छ।
आज केही नयाँ अनुहारले मन्त्री पद पाउँने सम्भावना रहेको देखिन्छ । रिक्त मन्त्रालयमा आज नै नियुक्तिका लागि टुंगो लगाउँने । बाँकीका लागि थप गृहकार्य गर्ने बुझिएको छ । अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय खाली छन् ।
थप ३ संक्रमितको मृत्यु : अस्पतालले लाश निकाल्न पैसा ल्याउनु भन्यो, सबै परिवार आइशोलेसनमा !
आज दशैँको पाँचौं दिन, स्कन्दमाता भगवतीको यसरी पूजा गर्नुहोस्
नेपालमा कोरोना कहर : संक्रमणबाट श्रीमान् श्रीमतीको एकैदिन मृत्यु
सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा, कोरोना उपचार निःशुल्क गर : भट्टराई
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने कोरोना संक्रमित सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने
आज बिराटनगरमा मात्र ७ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
असईपछि प्रहरी जवान रामबहादुरको लाश पनि मोहना नदी नजिकै भेटियो
कोरोना संक्रमण बढेपछि गृह मन्त्रालयले जारी गर्यो निर्देशन, जिल्ला नछाड्न सिडिओलाई आदेश
आइसोलेशन सेन्टरलाई कोभिड अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुको दशैंँखर्च कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने
आज ३७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा मात्र २३८८ जना
आयोगद्धारा सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय
नेपाली काँग्रेसका सबै सांसदले दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने
बडादशैंको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको यसरी गर्नुहोस् पूजा, यस्तो छ महत्व